धादिङको उत्तरी क्षेत्र लागूपदार्थ ओसारपसारमा कसरी संसारभरि जोडिन पुग्यो ? - Parichay Network
धादिङको उत्तरी क्षेत्र लागूपदार्थ ओसारपसारमा कसरी संसारभरि जोडिन पुग्यो ?
परिचय नेटवर्क द्वारा	 १० चैत्र २०७६, सोमबार ११:४९ मा प्रकाशित
२०७३ पुसमा धादिङका वेगबहादुर तामाङ (४१) र धनबहादुर तामाङ (४८) बैंकक्को एउटा कारागारबाट रिहा भए । २०५७ साल जेठमा उनीहरू थाइल्यान्डको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए । पाकिस्तानको इस्लामावादबाट बैंकक् पुगेका उनीहरू लागूपदार्थसहित समातिएका थिए ।
“लागूपदार्थ बोकेको थिएँ, पहिलो पटकमै समातिएँ” – धनबहादुर तामाङ, ४७, खनियाबास गाउँपालिका–४
कहिले पक्राउ पर्नुभयो र छुट्नुभयो र ?
सन् २००० को जुलाई अन्तिममा थाइल्याण्ड विमानस्थलबाट पक्राउ परें । सन् २०१६ को डिसेम्बर अन्तिममा छुटें ।
कता जाँदै हुनुहुन्थ्यो, साथमा के थियो र?
पाकिस्तानबाट बैंकक् जाँदै थिएँ । साथमा करीब ५०० ग्राम जति लागूपदार्थ थियो ।
उनीहरूले कसरी पत्ता लगाए ?
लागूपदार्थ खाएको थिएँ । पक्रेर भिडियो एक्सरे गरे । त्यसपछि छेर्ने औषधि दिए । भातभुतै बाहिर निस्कने रहेछ ।
यस्तो काममा कसरी लाग्नुभयो ?
लामो कहानी छ । किन ढाँटिरहनु, साथीहरूको संगतले हो ।
कति पटक ओसारपसार गर्दा पक्राउ पर्नुभयो र?
पहिलो पटकमै समातिएको हो ।
लागूपदार्थ पठाउने मानिसले तपाईंलाई के भनेका थिए ?
त्यति ठूलो कुरा होइन यो । पक्राउ परे पनि दुई वर्ष त हो नि भनेका थिए । दुई वर्ष हो भने ठीकै छ नि, छोरो मानिसले जेल पनि पर्नुपर्छ भनेर गरेको । तर, जिन्दगी त्यहीं सकिन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन । थाहा भए त्यस्तो गर्ने थिइनँ ।
कति पैसा दिन्छु भनेका थिए ?
७०० डलर ‘क्यारिएर खर्च’ भनेर दिएको थियो ।
इस्लामावादमा कसले ल्याएर दियो ? तपाईंहरूसँग को सम्पर्कमा थियो ?
इस्लामावादमा लागूपदार्थ ल्याएर दिने नेपाली नै थियो । त्यो अहिले यो संसारमा छैन । थाइल्यान्डमा लगेर चाहिं हब्सीलाई दिनुपर्ने थियो, तर
एअरपोर्टमै झ्याप पारिहाल्यो ।लागूपदार्थ पेटमा निलेर हिंड्दा कस्तो हुन्थ्यो ?
साथीहरूलाई कस्तो भो थाहा छैन तर मलाई चाहिं गर्मी ‘फिलिङ’ भयो । तल्लोपट्टि पेट फुकेको जस्तो हुन्थ्यो ।
त्यो काममा जानुअघि नेपालमा के गर्नुहुन्थ्यो ?
म कतारमा ‘बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन’ मा ‘कार्पेन्टर’ को काम गर्थें । १९९५ मा कतार छिरेको थिएँ, त्यसपछि दुबई गएँ । काम चित्त नबुझेर काठमाडौं आएर काम खोजिरहेको थिएँ । एक ट्रिप गएर आए पैसा हुन्छ भन्ने भयो । फेरि दिनैपिच्छे भेट्ने मानिसले किन नआँटेको भन्न थाले । मन पनि पागल जस्तो भयो । अनि एक पटक जाऊँ न त भनेर निर्णय गरियो ।
त्यसरी जाने कति जना हुनुहुन्थ्यो ?
दुई जना वेगबहादुर र म ।
कति वर्षको जेल सजाय भएको थियो ?
पहिले फाँसीको सजाय भएको थियो । हामीले अपराध स्वीकार गरेको कारण आजीवन कारावासमा परिणत ग¥यो । अस्वीकार गरेको भए शायद मृत्युदण्डको सजाय पनि हुन्थ्यो होला । त्यसवेला धेरैलाई मृत्युदण्ड दिइरहेको थियो । फाँसी दिनेलाई फाँसी, गोली ठोक्नेलाई गोली ठोकिरहेको थियो ।
जेल जीवन सम्झिंदा अहिले कस्तो लाग्छ ?
नर्कबाट स्वर्ग आए जस्तो लाग्छ ।
अहिले पनि तपाइँको गाउँका मानिस त्यस्तो काममा जान्छन् ?
म कसैसँग सम्पर्कमा छैन । दुई छोरा छन् । उनीहरूलाई कसरी समय दिने, कसरी राम्रो बाटोमा लगाउने भन्ने छ मलाई । मैले कुकुरले नपाउने दुःख पाएँ । उनीहरूले त्यस्तो दुःख नपाउन् भन्ने छ । जसरी हुन्छ उनीहरूलाई राम्रो बाटोमा लगाउनु छ ।
थाइल्याण्डका कारागारबाट उनीहरूसँगै अरुणकुमार तामाङ र इमान गुरुङ पनि रिहा भएका थिए । सन् २००० को अगस्त महीनामा अरुण र केही समयपछि गोरखा बारपाकका इमानसिंह गुरुङ बैंकक् विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए । वेगबहादुर र धनबहादुर जस्तै पाकिस्तानबाट लागूपदार्थ बोकेर थाइल्यान्ड प्रवेश गर्न खोज्दा उनीहरू पक्राउ परेका थिए । दुवैलाई मृत्युदण्डको सजाय भएको थियो । अपराध कबुल गरेपछि त्यसलाई आजीवन कारावासमा परिणत गरियो । १६ वर्ष जेल सजाय काटेपछि उनीहरू पनि रिहा भएर नेपाल फर्किए ।
१७ वैशाख २०७३ मा कपनबाट प्रहरीले पूर्णबहादुर पाख्रिन तामाङलाई पक्राउ ग-यो । ५० लाख रुपैयाँ नगद सहित उनको साथबाट ३०२ ग्राम ‘एम्फेटामाइन’ बरामद भएको थियो । प्रहरीका भनाइमा थाइल्यान्डबाट मगाएको सो लागूपदार्थ यूरोप पठाउने तयारीमा थिए, उनी ।
धादिङको उत्तरी क्षेत्र लागूपदार्थ ओसारपसारमा कसरी संसारभरि जोडिन पुग्यो ? आर्थिक रूपमा विपन्न यो बस्तीका गाउँले किसान कसरी यस्तो अपराधमा संलग्न हुन पुगे रु यसको कारण थाहा पाउन तीन दशक अगाडि पुग्नुपर्छ ।
“मृत्युदण्डको सजाय भएको थियो । मैले अपराध स्वीकारेपछि आजीवन कारावास भयो” – वेगबहादुर तामाङ ४१, खनियाबास गाउँपालिका–५
कस्तो अवस्थामा पक्राउ पर्नुभयो ?
सन् २००० को जून १३ मा पाकिस्तानबाट जहाजमा थाइल्याण्ड जाँदा त्यहाँको विमानस्थलमा पक्राउ परें । त्यसअघि म साउदी अरबको जेद्दा शहरमा काम गर्थें । कम्पनी राम्रो भएन, नेपाल फर्कें । ऋण थियो, त्यो तिर्न पनि अर्को देश जानुपर्ने भयो । दलालको फन्दामा परेर त्यहाँ पुगेको थिएँ ।
तपाईंको साथबाट के भेटिएको थियो ?
लागूपदार्थ ७०० ग्राम हेरोइन ।
यसरी बोकेर हिंड्दा जोखिम हुँदैन र ?
हामीले नबुझेको कारणले मात्र । एकदमै जोखिमपूर्ण हुने नि १ त्यसअघि हामीले त्यस्तो कुरा देखेको पनि थिएनौं । त्यहाँ भित्र के छ भन्ने ज्ञान पनि थिएन । प्याकिङ गरेको चिजलाई यहाँबाट त्यहाँ पु¥याउने भन्ने मात्रै जानकारी थियो । त्यसबापत पैसा पाइन्छ भन्ने थियो ।
एक पटक लैजाँदा कति पैसा आउँथ्यो ?
१६०० डलर दिने भन्ने थियो ।
तपाईं कति पटक ओसारपसारमा संलग्न हुनुभयो ?
पहिलो पटकमै पक्राउ परे ।
कसरी पक्राउ पर्नुभो ?
हामीभन्दा अघि पनि केही नेपाली पक्रिएको रहेछ । त्यसपछि जो–जो नेपाली आउँछन् उनीहरूलाई एक्सरेमा हाल्ने गरेको रहेछ । ‘बिजनेस’ र ‘अफिसियल’ भिसामा जानेलाई अलग्गै तर टुरिस्ट भिसामा आउने सबैलाई ‘एक्सरे’ मा हाल्ने गरेको रहेछ ।
कति जेल सजाय भएको थियो ?
मलाई मृत्युदण्डको सजाय भएको थियो । मैले अपराध स्वीकारेपछि आजीवन कारावास भयो ।
जेल जीवन कस्तो थियो ?
जेलको अवस्था भनेको गोठमा बाँधेको बस्तु जस्तो थियो । भाषा, संस्कृति, खानपान नमिल्ने भएकोले अत्यन्तै कठिनाइ हुन्थ्यो । पाँच वर्षसम्म त म पागल जस्तो भएको थिएँ । आफूलाई ‘कन्ट्रोल’ नै गर्न नसक्ने भएको थिएँ । म कसरी यहाँ आइपुगे रु कसरी किन यस्तो काममा लागे भन्ने कुराले ‘रिगरेट’ हुने । जानेर भन्दा पनि नजानेर फसेको थिएँ म । साउदी अरब जाँदा ऋण लिएर गएको मेरो मनमा सधंै कसरी ऋणबाट उम्कने भन्ने मात्रै थियो । २०/२१ वर्षको उमेरले होला गलत काममा छु भन्ने पनि नलाग्ने ।
परिवारसँग कसरी सम्पर्क हुन्थ्यो ?
चिठीको माध्यमबाट हुन्थ्यो । जेलबाट दैनिक एउटा चिठी लेख्न पाउँथें । वाङकाङ सेन्ट्रल जेल हो । चार हजार कैदी हुने । परिवारका सदस्य र गाउँले साथीहरूलाई चिठी लेख्थें । नेपालबाट दाजुहरूले चिठी लेख्नुहुन्थ्यो । पछि आश मार्थे कि के हो विस्तारै ‘ग्याप’ बढ्दै जान्थ्यो ।
घरबाट चिठी आउँदा मान्छे भेटेको जस्तै हुन्थ्यो । एकदमै ‘गुड फिलिङ’ हुन्थ्यो । राति निद्रा पनि राम्रोसँग पर्दथ्यो । अलि बढी खाना खान मन पनि लाग्थ्यो । जेलमा बाँच्ने आधार भनेकै एउटा चिठी हो । मैले गल्ती नगरेको भए म पनि त्यो गाउँ ठाउँमा हुन्थे नि भन्ने लाग्थ्यो ।
१७ वर्षपछि जेलबाट निस्कँदा कस्तो लाग्यो ?
मलाई जूनको उज्यालो हेर्न मन थियो । नेपाल जान र परिवारसँग भेट्न पाइयोस् भन्ने थियो । मलाई अर्को चिन्ता भनेको नयाँ जिन्दगी कसरी शुरू गर्ने भन्ने थियो । किनभने त्यत्रो वर्ष जेलमा खेर फालेको थिएँ ।
चन्द्रमा हेर्ने चाहना किन हुन्थ्यो नि ?
दिउँसो साढे तीन बजे कोठामा पसिसक्नुपथ्र्यो । बिहान ६ बजे बाहिर निस्कन पाइन्थ्यो । १७ वर्षसम्म मैले कहिल्यै पनि चन्द्रमा देख्ने अवसर नै पाइनँ ।
“घले (मानसिंह) को घटनापछि इन्डोनेसियाले नेपालीलाई दिंदै आएको अन अराइभल भिसा बन्द ग¥यो”, मल्लले भने । मल्लका भनाइमा नेपालको लागूपदार्थ तस्करीमा संलग्नहरूको पाकिस्तान ‘कनेक्सन’ अनौठो छ ।
साविकको सत्यदेवी गाविस हालको खनियाबास गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष बुधराम तामाङ चाँडो धनी हुने लोभमा गाउँका धेरै युवा फँसेको बताउँछन् । “दलालले कता कता पु-याएर के के गरे थाहा नपाउनेहरू लोभमा फँसे । धेरै पैसा कमाउने आशमा लागूपदार्थ बोके, कोही उतै मरे, कोही मुुश्किलले बाँचेर फर्किए ।”
अहिले पनि सत्यदेवीका धेरै मानिस विदेशी जेलमा छन् । बुधराम भन्छन्, “हामी उनीहरूलाई उद्धार गरौं भन्ने चाहन्छौं । तर विदेशको मामिलामा केही गर्न सकिंदैन ।” अनुरोधको भाषामा यी वडाध्यक्ष भन्छन्, “जेल परेका सबै गरीब, दुःखी हुन् । धनी एउटा पनि छैनन् । लौ न के गर्न सकिन्छ गरौं !” (खोज पत्रकारिता केन्द्र)